Omume ihu igwe iji kwado Ja Ja, ọ bụghị Blah Blah, Ọgbọ Ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Omume ihu igwe iji kwado Ja Ja, ọ bụghị Blah Blah, Ọgbọ Ọhụrụ
Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • ICTP • News • ndị mmadụ • Tourism • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị ọrụ Center for Responsible Travel (CREST) ​​na ndị isi oche bidoro onyinye Martha Honey Legacy Award kwa afọ na 2019 dị ka ụzọ isi mata onye nọ na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nke na -eme nnukwu mgbanwe na ịkwanye envelopu na njem dị mkpa.
Ihe nrite a na -amata nnukwu njem nlegharị anya ogologo oge chere echiche ịbụ onye ndu Martha Honey, onye enyere ya nsọpụrụ.
Martha Honey bụ ngalaba-guzobere na Director Emeritus nke Center for Responsible Travel (CREST), nke hiwere na Washington, DC.
N'ime iri afọ abụọ gara aga, o deela ma kuzie nkuzi nke ọma na njem nlegharị anya, mmetụta njem, njem na njem nlegharị anya, mgbanwe ihu igwe, na okwu asambodo.
N'afọ a, Maazị Geoffrey Lipman, Co-guzobere SUNx-Strong Universal Network, na Onye isi oche nke Ndị mmekọ mba ụwa na ndị njem (ICTP), ekwuputara dị ka onye nnata nke 2021 nke Martha Honey Legacy Award site na CREST.
Nke a bụ okwu Maazị Lipman gbasara ịnata ihe nrite a.
Achọrọ m ikele CREST maka nturu ugo a dị ebube yana ịmata njem nlegharị anya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ogologo oge chere ndu Martha Honey, onye enyere ya nsọpụrụ. Obi dị m ụtọ na anyị gbanwere echiche n'ime oge mepere anya karịa na mbido 1990s ọ bụghị na mbibi, ịkpọasị butere ọrịa, ụwa Trumpian nke taa. Ọ na -enye anyị ohere ịbịa n'otu okwu ahụ site n'echiche dị iche iche, na obodo nsọ na nsọpụrụ.
Ana m anabata ihe nrite ahụ, ọ bụghị nke ukwuu maka onwe m, mana dịka nkwenye nke mmụọ nsọ m nwetara n'oge ahụ site n'aka enyi m na onye ndụmọdụ m afọ 25, onye nwụrụ anwụ Maurice Strong - nkwado na onye na -akwado ihu igwe ọkara narị afọ gara aga.
Ọ na -ejukwa m anya ihe ọ rụzuru na ogbo ụwa.
Otu Maurice Strong nke haziri ọgbakọ ụwa 1972 na 1992 Earth Earth Summit - ya na ndị isi obodo 124. Onye mere ọmụmụ UNEP, IPCC, UNFCCC, Earth Charter, na ijeri ijeri dollar Ted Turner nyere UN Foundation. O nwekwara ike nwee akara mkpịsị aka na MDGs, SDGs, na nkwekọrịta ihu igwe Paris.
Dịka a na-etinye ọhụụ ya n'ime DNA nke SUNx Malta, ihe nketa ya na ohere njem & njem, otu nọ na EU, ya na gọọmentị Malta jikọrọ aka wee nwee ọganihu. Njem Enyi na Enyi na Enyi.
Ozi m taa, si SUNx Malta, tinyere ezigbo ekele m nwere maka CREST maka onyinye a, nwere isi atọ.
Otu, Nsogbu Ihu Igwe dị adị - ọ kwesịrị ịbụ isi ihe anyị lekwasịrị anya. Ọ dịkwa ya mkpa ugbu a. Nke a bụ afọ kacha ekpo ọkụ na ebe nchekwa na nso nso a, yana mmetụta ọjọọ kacha njọ na -arịwanye elu gburugburu ụwa. Ọnọdụ ikuku ikuku anyị ugbu a bụ 2030 bụ mmụba 16 % karịa mbelata 50 % achọrọ iji nọrọ na egwu ruo oke ogo 1.5.
Abụọ, Nkwupụta Njem Nleta Glasgow bụ nzọụkwụ dị n'ụzọ ziri ezi, mana anyị ga -aga n'ihu, ngwa ngwa. Anyị chọrọ DASH-2-Zero, Carbon Carbon 2030 karịa 2050 na site na 2050 (afọ iri atọ) anyị achọghị GHG. DASH na -anọchite Declare: Act: Nkwado na Olileanya.
Atọ, olile anya anyị kacha mma bụ Ntorobịa, onye dịka Greta Thunberg kwuru ga -ehichasị ọgbaghara anyị. Ndị na -eto eto taa bụ Ja Ja - Ee anyị nwere ike mepụta. Ọ bụghị blah blah - dịka Thunberg na -ezo aka na nke anyị. Ha ga -eme ihe siri ike achọrọ iji bie na Nsogbu Ihu Igwe - maka na ọ gaghị apụ.
Anyị ga -enyekwa ha Nkwado na Olileanya ha kwesịrị.
Dị ka Innuits na -ekwu, "Anyị anaghị eketa ụwa site na nna nna anyị, anyị na -agbaziri ya n'aka ụmụ anyị." Daalụ
Banyere SUNx Malta
SUNx bụ ọgbakọ dabere na EU, ọ bụghị maka uru, guzobere dị ka ihe nketa maka Maurice Strong, ọsụ ụzọ ihu igwe na nkwado, yana ya na gọọmentị Malta.
SUNx Malta mepụtara “Green & Clean, Climate Friendly Sistemụ Njem” nke emebere iji nyere ụlọ ọrụ njem na ndị njem na obodo aka ịtụgharị gaa na Ọnọdụ ihu igwe ọhụrụ. Ihe mmemme a dabere na mbenata carbon, izute ebumnuche ebumpụta ụwa, yana isonye na Paris 1.5C trajectory. Ọ bụ mmemme na agụmakwụkwọ lekwasịrị anya-na-akwado ụlọ ọrụ na obodo nke oge a ka ha wepụta ebumnuche ihu igwe ha ma gbaa ndị isi na-eto eto echi ume ịkwadebe maka ọrụ na-akwụghachi ụgwọ n'ofe njem. Onye nchoputa ya na Onye isi ala ya bụ Prọfesọ Geoffrey Lipman.
SUNx Malta na-akpọ maka DASH-2-Zero maka ngalaba njem na njem nlegharị anya. Na -agbali maka ime n'ihu ngwa ngwa. Ee, na Net Zero Carbon, mana ka ọ na -erule afọ 2030 na ntinye onwe ya na O nweghị gas griin haus ka ọ na -erule 2050. DASH pụtara Kwupụta & Mee Nkwado na Olileanya. Anyanwụx Malta na-azụ ndị na-eto eto 100,000 siri ike asọmpi ihu igwe gafee United States niile ka ọ na-erule 2030. Ya na ndị mmekọ Sustainable Development Goal (SDG-17), anyị na-enye njikọ UNFCCC Ndekọ nke Ọchịchọ Ọsọ na nkwado maka ụlọ ọrụ na obodo ndị enyi.
Maka ozi ndị ọzọ biko kpọtụrụ Olly Wheatcroft [email protected]
Viorel ekwu, sị:
November 21, 2021 na 23: 31
Hablan de Cambio Climático y la Elite Luciferinas nos gasean todos los día con el “Proyecto HAARP” desde mas de 20 años, y nuestros océanos estan llenos de los barriles de residuos de Uranio 238 echados maresados ​​en los los courses. ..!¡